El Hadj Omar Bongo Ondimba (wuxuu ku dhashay Albert-Bernard Bongo; 30 Disember 1935 - 8 Juun 2009) wuxuu ahaa siyaasi reer Gabon ah oo ahaa Madaxweynaha Gabon 42 sano, laga soo bilaabo 1967 ilaa dhimashadiisa 2009. Cumar Bongo waxaa loo dalacsiiyay jagooyin muhiim ah isagoo ah Mas’uul da ’yar oo ka hoos jiray Madaxweynihii ugu horreeyay ee Gabon Léon M'ba sanadkii 1960-kii, ka hor inta aan loo dooran Madaxweyne-kuxigeenka midkiisii ​​gaarka ahaa 1966. 1967, wuxuu ku guulaystay M'ba inuu noqdo Madaxweynihii labaad ee Gabon, markii uu dhintay.
Bongo wuxuu madax ka ahaa nidaamka keli-taliska ah ee Xisbiga Dimuqraadiga Gabon (PDG) ilaa 1990, markii, uu wajahay cadaadis dadweyne, waxaa lagu khasbay inuu Gabon soo bandhigo siyaasad xisbiyo badan. Jiritaankiisa siyaasadeed inkasta oo uu si weyn uga soo horjeeday xukunkiisa horaantii 1990-meeyadii waxay u muuqdeen inay mar kale ka soo baxayaan isku-duwidda awoodda iyagoo u keenaya inta badan hoggaamiyeyaasha mucaaradka ugu waaweyn waqtigaas. Doorashadii madaxweynenimada ee 1993 waxay ahayd mid si aad ah loo isku khilaafsan yahay laakiin waxay ku dhamaatay dib u doorashadiisa ka dib iyo doorashadii ku xigtay ee 1998 iyo 2005. Tirada guud ee baarlamaaneedkiisu way korodhay mucaaradkuna waxay noqdeen kuwa laga adkaaday mid kasta oo guuleysta doorashada. Ka dib markii Madaxweynaha Cuba Fidel Castro uu shaqada ka degay bishii Feebaraayo 2008, Bongo wuxuu noqday hoggaamiye dunida ugu cimri dheeraa boqortooyo ahaan. Wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ugu muddada dheeraa boqortooyooyinka aan boqornimada ahayn tan iyo 1900.
Bongo waxaa lagu dhaleeceeyay inuu saameyn ku yeeshay naftiisa, qoyskiisa iyo aqoonyahanada maxalliga ah mana u shaqeynin Gabon iyo dadkiisaba. Tusaale ahaan, siyaasiga cagaaran ee Faransiiska Eva Joly wuxuu sheegtey in mudadii uu xukunka hayey Bongo, in kasta oo GDP uu hoggaamiyo koboc kasta oo ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee Afrika, Gabon ay dhistay kaliya 5 km oo waddo-bilaash ah sanadkii welina ay haysato mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya adduunka. Heerka dhimashada ilmaha markuu dhintey 2009.
Ka dib dhimashadii Bongo bishi Juun 2009, wiilkiisa Ali Bongo - oo aabihiis u xilsaaray xilal wasaaradeed muhiim ah — ayaa loo doortey in uu badalo Ogosto 2009.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Omar_Bongo&oldid=205370"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Agoosto 2020, marka ee eheed 07:43.